एनसेलले फेरी तिहारका लागि उपाहार नै उपहार ल्यायो ! पहिलेको भन्दा चार गुणा बढि फोरजी डेटा बोनस - S Khabar
एनसेलले फेरी तिहारका लागि उपाहार नै उपहार ल्यायो ! पहिलेको भन्दा चार गुणा बढि फोरजी डेटा बोनस
एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले तिहार र छठ पर्वको अवसर पारी आफ्ना ग्राहकहरुका लागि फोरजीमा डेटा बोनस योजना ल्याएको छ । यस अन्र्तगत ग्राहकले चार गुणा बढि डेटाको फाईदा लिन सक्नेछन् ।
आउदो मंसिर १४ गतेको उपनिर्वाचनको लागि यस्ता आचारसंहिता जारी गर्यो
कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाका ५३ नेता कार्यकर्ता नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गर्दै